Hadaljeedinta Madaxweyne Farmaajo ee casho sharafta diblomaasiyiinta ka hawlgala Muqdisho | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Hadaljeedinta Madaxweyne Farmaajo ee casho sharafta diblomaasiyiinta ka hawlgala Muqdisho
Hadaljeedinta Madaxweyne Farmaajo ee casho sharafta diblomaasiyiinta ka hawlgala Muqdisho
Hadaljeedinta Madaxweyne Farmaajo ee casho sharafta diblomaasiyiinta ka hawlgala Muqdisho mudanayaal iyo Marwooyin
Aan fursaddan uga faa’idaysto inaan idinku soo dhaweeyo Villa Soomaaliya. Run ahaantii waan ku faraxsanahay inaan idinku martigeliyo halkan si aad noogala qayb qaadataan dabbaaldegga sannad-guurada 59-aad ee soo wareegtay madaxbannaanideenna. Soomaalida ku dhaqan daafaha caalamku waxay munaasabaddan qiimaha leh u dabbaaldagayeen toddobaadkii la soo dhaafay oo dhan. Waa damaashaad Soomaalida ugu suntan rajo iyo farxad.
Sida aad ka warqabtaan, Soomaaliya waxay sannadihii la soo dhaafay samaysay horumar xawli ah, waxaana ku faraxsanahay inaan idin la wadaago in dowladdaydu ay gaartay guulo waaweyn intii aan talada hayay, walow ay caqabado jiraan.
Dhanka dhaqaalaha, Soomaaliya waxay horumar la taaban karo ka samaysay la dagaallanka musuqmaasuqa, sare u qaadidda dakhliga gudaha iyo buuxinta shuruudaha dayn cafinta ee Hay’adda Lacagaha Adduunka (IMF) oo meel fiican maraya.
La dagaallanka musuqmaasuqa iyo dib u habaynta hannaanka dowladnimada ayaa dowladdeenu suurtageliyay inay si joogto ah u bixiso musharaadka shaqaalaha dowladda iyo in meesha laga saaro dhaqaalihii yaraa ee aan haysannay ee la lunsan jiray. Waxa intaasi dheer, dowladdaydu waxay ku guulaysatey inay xalliso god-daloolooyinka hannaanka maaliyadda. Waxaa naga go’an inaan Beesha Caalamka kala shaqaynno dib u habaynta hannaanka dowladnimada ee heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed.
Marka laga yimaaddo caqabadaha dhanka amniga, waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay leedahay mustaqbal ifaya. Tan waxa caddayn u ah doonista xooggan iyo adkaysiga shacabkeenna oo si adag uga hor yimi argagaxisada. Mar labaad ayaan doonayaa inaan hoosta ka xarriiqo in Dowladda Soomaaliya ay ka guulaysanayso cadawgeeda, ayna ka go’an tahay inay horumar ka gaarto dhan walba.
Waxaan jeclaan lahaa inaan Beesha Caalamka uga mahadceliyo taageerada hagar la’aanta ah ee ay ku kaalmaynayso shacabkeenna. Waxaan idiin sheegayaa inaan dadaalkiinnu noqon doonin hal bacaad lagu lisay. Taageeridiinnu waxay qayb libaax ah ka qaadatay horumarka aan gaarnay sannadihii la soo dhaafay. Halkan waxaan u joognaa inaan saaxiibadeenna caalamka kala shaqaynno sidii mustaqbal fiican loogu abuuri lahaa dadkeenna.
Ugu dambayntii, dowlad iyo shacabba waxa naga go’an inaan dalkeenna hore u dhaqaajinno, isla markaasna aan dhisno dal dhexdiisa nabad ah, dalalka deriskana nabad kula nool.
Previous articleTaliyaasha Ciidammada Xoogga, Booliiska Iyo Asluubta oo gaaray Dhuusamareeb
Next articleMareykanka oo dib u bilaabaya taageeradii uu siin jiray qeyb kamid ah Ciidanka Xoogga Dalka.